सरसफाइ भए सुन्दर हुन्छ सहर : केकी अधिकारि | Seto Khabar
सरसफाइ भए सुन्दर हुन्छ सहर : केकी अधिकारि
तपाईलाई सबैभन्दा मनपर्ने सहर कुन हो ? : मलाई सबैभन्दा बढी अष्ट्रेलियाको मेलबर्न मन पर्छ । त्यो एकदमै व्यवस्थितर र मनमोहक छ । हाम्रो देशमा त्यस्तो सहर छैन । नेपालका सहरमध्ये मनपर्ने पोखरा हो । यदी सहरको सरसफाई, बाटोघाटो, पार्क, ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ भने सहर यत्तिकै सुन्दर बन्छ ।
काठमाडौं कसरी राम्रो बन्ला ? : अरु देशका सहरसँग तुलना गर्दा काठमाडौं फोहोर र अव्यवस्थित लाग्छ । यहाँ जनसंख्या वृद्धि, फोहोर र अग्ला अव्यवस्थित भवनहरुले काठमाडौंलाई कुरुप बनाएको छ । सरकारले सहरलाई सुन्दर बनाउने मापदण्ड त ल्याएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
उपत्यकाको सबैभन्दा मनपर्ने र मन नपर्ने कुरा के हो ? : मलाई उपत्यकाको मनपर्ने कुरा यहाँका पूराना मठ मन्दिर हुन् । यसो फुर्सद हुनेबित्तिकै म मठमन्दिरको अवलोकन गर्छु । मन्दिर क्षेत्रमा घुम्दा आनन्दको अनुभुति हुन्छ ।
केहि समयको लागि काठमाडौंको मेयर भए के गर्नुहुन्थ्यो ? : मैले काठमाडौंको जनसंख्या हेरेर नयाँ कार्य योजनाहरु ल्याउँछु । यहाँको धुवाँधुलो, प्रदुषण, सरसफाइ, सडक निर्माण कार्यलाई केन्द्रमा राखेर योजनाहरु बनाउन्छु ।